Iziko leDolophu yaseKillarney
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarie
Yonwabele lonke iZiko leDolophu yaseKillarney ekufuneka libonelele, kule ndlu isanda kuhonjiswa ibekwe kumbindi wedolophu yaseKillarney. Iindawo zokutyela, ii-pubs kunye nokuthenga konke emnyango wakho.
Ukuhamba umgama ukuya kwipaki yesizwe. Akukho mfuneko yemoto njengoko unokuthatha uhambo lwemini ukuya kwiGap yaseDunloe, iRing of Kerry kunye nolunye ukhenketho oluninzi olukhoyo edolophini. I-Apartment inamagumbi okulala amabini e-en-suite, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi. Isanda kulungiswa kwaye yanikwa intuthuzelo kunye nolonwabo lwakho.
Igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala likhulu kwaye liqaqambile. INetflix ibonelela ngokuzonwabisa kwakho ngeentsuku zemvula okanye ngorhatya. Eminye imidlalo yebhodi yentsapho ibonelelwe.
4.86 · Izimvo eziyi-321
Nangona iflethi isembindini wedolophu yindawo ekhuselekileyo nezolileyo. Siphakathi kwePenny's kunye neDunnes Store kunye nazo zonke izinto eziluncedo uKillarney anokuzinikezela.
Ndihlala eKillarney kwaye ndiya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo kunye nolwazi onokulufuna malunga nommandla ongqongileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Killarney